Maamul Photos on iPhone: Ku dar / Dhoofinta / Import / Delete Photos
> Resource > iPhone > Maamul Photos on iPhone: Ku dar / Dhoofinta / Import / Delete Photos
Haven qaaday sawiro badan oo aad iPhone oo ay go'aansato inay dhoofiyaan si PC? Photos aad iPhone yihiin qas ka, si aad rabto in aad ku rid si? Ama waxaad kaliya go'aansato in aad sawiro ku darto si aad iPhone cusub. Si loo maareeyo photos on iPhone si fudud, waxaad isku dayi kartaa Tababaraha ah iPhone sida Wondershare TunesGo Retro (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo Retro (Mac) (isticmaalayaasha Mac). Barnaamijkan awood aad ku darto, dhoofinta iyo tirtirto photos iPhone in Dufcaddii.
Download TunesGo Retro si ay u maareeyaan photos iPhone si fudud!
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo la mid ah ka shaqeeyaan. Halkan waxaan ku qaadan version Windows sida tusaale.
Connect iPhone in computer iyo ordi MobileGo
Connect aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB ah. Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo Retro on your computer. Barnaamijkan wuxuu si fiican u shaqeeyaa kombiyuutarka in ay maamushaa Windows 8/7 / XP / Vista. Markaas, aad iPhone si degdeg ah loo baari doono.
Maamul photos iPhone: sawiro kala iibsiga si iPhone
Hadda, guji "Sawirro" khaanadda tagay inay soo qaadaan suuqa kala maamulka sawirka. Si aad sawiro ku darto si iPhone, ugu horreeya oo dhan, dooran album ah, sida Photo Library, aad iPhone si loo badbaadiyo sawiro laga keeno. Ama, guji "Add" si ay u abuuraan album cusub. Fur heestii. Guji "Add" mar kale. Raadi si aad sawiro doonayay oo iyaga soo dhoofsadaan.
Maamul photos iPhone: sawiro dhoofinta in Roll Camera iyo Photo Library
Haddii aad u badbaadiseen sawiro badan ee Camera Roll oo Photo Library aad iPhone, aad u dhoofin karaan in ay kombiyuutarka. Dooro album aad u jeclaystay, sida Photo Library, oo guji "Dhoofinta in". Markaas, dooro meel on your computer si loo badbaadiyo heestii dhoofiyo. Markaas, barnaamijkan uu bilaabo inuu dhoofin album ah.
Haddii aad go'aansato in aad u dhoofiyaan sawiro. Just furo album iyo dooran photos in aad dhoofin doonaa. Sidoo kale, guji "Dhoofinta in". Ka dib markii ay suuqa kala file browser soo booda, maraan si ay meesha aad rabto in aad si loo badbaadiyo sawirrada.
Maamul photos iPhone on PC: tirtirto photos in Camera Roll oo Photo Library
Aad sawiro iPhone Marka barara, waxaad iyaga tirtiri kartaa hal mar. Fur album ah, sida maktabada Photo. Dooro sawirada aadan doonayn in aad mar dambe sii. Markaas riix "Delete". Haddii aad qabto albums qaar ka mid ah in aad la abuuro oo la barnaamijkan, waxa kale oo aad tirtiri kartaa albums kuwan.
maamulka sawir iPhone: wareejiyo photos dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod
Haddii aad qabto iPhone kale ama iPad ama iPod, waxaad sidoo kale ku wareejin karaa photos u dhaxeeya. Connect aad iPhone iyo qalabka kale ee Apple inay kombiyuutarka waqti isku mid ah. Markaas barnaamijkan iyaga muujinaysaa in uu furmo suuqa hoose. In aad suuqa kala maamulka iPhone sawir, sawiro la xusho oo guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in". In ay liiska hoos-hoos, waxay doortaan in ay u dhoofiyaan sawiro si aad iPhone, iPad ama iPod.
Fiiro gaar ah: Marka la joogo, Waxa kaliya ee aad ku wareejin kartaa sawiro dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod la version Windows ah. Haddii aad rabto in aad u samayn la version Mac ah, waxaad marka hore la dhoofin karto sawiro ka mid iDevice in computer ka, ka dibna barkinta iDevice iyo xirmaan iDevice kale in kombiyuutarka. Ka dib markii in, dajiyaan sawiro kuwaas waxaa si.
Sida loo hagaajin iPhone ma diraya ama qaata dhibaatooyinka fariimaha qoraalka ah
Dhibaatooyinka Volume iPhone Common iyo sida loo dayactir